Tag: ahụike | Martech Zone
Botco.ai: Ngwọta Azụmaahịa Na-akwado Nkwado HIPAA
Botco.ai's HIPAA-Kwadoro na mkparịta ụka na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-agbakwunye Contextual Chat Marketing na dashboard nyocha dị elu. Azụmaahịa Nkata Nzuzo na-enyere ndị ahịa aka ibido mkparịta ụka ahaziri iche na atụmanya na ndị ahịa dabere na otu ha si bịa ileta weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe mgbasa ozi. Ihe nyocha ọhụrụ ahụ na-enye nghọta miri emi banyere ajụjụ na omume ndị ọbịa. Tinyere njikọta Botco.ai na email, CRM, na sistemụ azụmaahịa ndị ọzọ, Azụmahịa Nkata Azụmaahịa na-eweta ọkwa nke ịhazi nke mkparịta ụka
Ọnụnọ Binary: Ahụmịhe Ndị Ahịa na Nlekọta Ọchịchị
Ọ bụrụ n ’ime nyocha ọ bụla gbasara njirimara njirimara na ahụmịhe ndị ahịa, ọ ga-abụrịrị na ị hụla njikọ njikọta ndị ahịa dị iche na ntinye ndị ahịa na mbọ SEO mpaghara maka ụlọ ọrụ. Taa, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-azụ ahịa na-adaberekarị n'echiche ndị ahịa (ya bụ, nyocha ndị ahịa n'ịntanetị na saịtị nyocha) iji mee mkpebi gụrụ akwụkwọ na ma ha ga-eso ụlọ ọrụ. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-arụtụ aka na saịtị dịka Google, Facebook na Yelp iji nweta ụdị ngosi nke ụdị ahụ
ReachEdge iji nyere ndị azụmaahịa mpaghara aka inweta ndị ahịa ndị ọzọ
Wednesday, September 25, 2013 Monday, May 4, 2015 Douglas Karr
Ulo oru nke obodo na-afu ihe ruru uzo ato n’ime ndu ha n’ihi ure n’ ahia na ahia ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ịga nke ọma na iru ndị na-azụ ahịa na ntanetị, ọtụtụ azụmaahịa enweghị ebe nrụọrụ weebụ wuru iji tọghata ndị ndu, esola ndu ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe niile, ma amaghị nke isi ahịa ha na-arụ ọrụ. ReachEdge, sistemụ ahia jikọtara ọnụ site na ReachLocal, na-enyere ndị azụmaahịa aka ihichapụ ọnya ahịa ndị a dị oke ọnụ ma chụpụ ọtụtụ ndị ahịa site na ha
Naanị ihe dọkịta ahụ nyere n'iwu?
Wenezde, August 24, 2005 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Na ngwụcha izu a gara aga, enwere m ọmarịcha njem azụmahịa / njem onwe m ruo Victoria na Vancouver, British Columbia. M gụsịrị akwụkwọ na High School na Vancouver afọ 20 gara aga ma laghachi na ugboro abụọ. Ọ bụ ihe ịrịba obodo - dị ọcha, mara mma, oge a na ike. M nọrọ ụfọdụ ezigbo enyi m si High School na anyị ọbụna nwetara 9 oghere nke golf na. Ọ bụ a na-akpali akpali izu ụka! (Na azụmahịa gara nke ọma, oke!) Achọpụtara m